Heerka Saddexaad ee COVID-19 oo ka dillaacay dalka | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa mar kale la warinayaa inuu dalka ka dillaacay heerka Saddexaad ee cudura faafa ee COVID-19, kaas oo ah saf-mar si deg deg ah uga tallaabayay qaarad ka qaarad, tan iyo markii uu ka soo if-baxay Shiinaha labo sano ka hor.
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo Caabuqa Covid-19 ah. Wasaaraddu waxaa ay sheegtay in 24 -kii saac ee ugu dambaysay laga baaray COVID-19 guud ahaan 887qof, iyadoo laga helay 29 qof.
Magaalada Muqdisho ayaa laga helay kiisaska ugu badn kuwaas oo tiradoodu gaareyso 17 qof, degaanada Puntland hoos yimaada ayaa iyagana laga helay 11 ruux oo xanuunku haleelay, halka Soomaaliland laga soo sheegay hal bukaan.
Dhimashada 24 -kii saac ee u dambeeyay dadka uu dilay Caabuqa Covid-19 waxaa lagu sheegay 6 ruux, (Banadir:2, Puntland:2, Jubbaland:1, Somaliland:1).
Tirada guud ee laga helay xanuunkan tan iyo intii uu soo billowday waxaa lagu sheegay in ay gaarayaan 15,323 qof, inkastoo ay bogsadeen tiro lagu qiyaasay 7,430, hadana waxaana u dhintay 804 qof .
Heerka Saddexaad ee COVID-19, ayaa la sheegayaa inuu ka duwan yahay heerarkii hore, waxaana guud ahaan degmooyinka Caasimadda, si weyn looga hadal hayaa soo laabasahada caabuqa Corona virus.